HAIR BUNDLE: 12A STRAIGHT RAW INDIAN / MINK VIRGIN HAIR EXTENSIONS - Ndi Mgbasa Na –abia
Ịgachi price $ 245.00
Anyị na-ewebata ngwungwu ngwongwo anyị maka ntutu RAW INDIAN / MINK maka obere nke ọnụahịa mkpọsa anyị !!
Lee ndị anyị na-azụ ọnụ ahịa ọnụahịa ị nwere ike ịgbakwunye mmechi maka mgbakwunye ọnụego ọzọ!
Anyị Raw Indian / Mink Virgin Ihe ngbacha isi na-anapụta India ozugbo. Ọ bụ otu n'ime ụdị ntutu kachasị dị mma n'ọma ahịa ma bụrụ ntutu dị mma. A na-egbute ngwa ahịa anyị niile na ebumpụta ụwa ha na ngwungwu ọ bụla na-esite na otu onye na-enye onyinye iji hụ na agbanwe agbanwe.